कात्तिक २६, काठमाडौं । हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीको चालू आवको पहिलो त्रैमासमा गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ९१ दशमलव २२ प्रतिशतले नाफा घटेको छ ।
कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. १० लाख ६० हजार नाफा कमाएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ९३ हजार १०४ मा सीमित भएको हो । कम्पनीले हालसम्ममा विद्युत् उत्पादन शुरु नगरेकाले र अन्य स्रोतको आम्दानी घटेकाले नाफा घटेको देखिन्छ ।
गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले अन्य स्रोतमार्फत रू. १८ लाख ५९ हजार आम्दानी गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. १ लाख ९१ हजारमा सीमित भएको हो । चुक्तापूँजी रू. ९९ करोड रहेको उक्त कम्पनीको जगेडा कोषमा रू. ८१ लाख ५५ हजार ऋणात्मक रहेको छ ।
नाफा घटेसँगै कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी पनि घटेको छ । कम्पनीको गत आवको पहिलो त्रैमासमा प्रतिशेयर आम्दानी ११ पैसा रहेकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा एक पैसा कायम भएको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ९९ दशमलव १८ रहेको छ ।